अब नेपाल बन्द हैन देशमा हुने गरेको ठगि, दलाली, घुसखोरी, भ्रस्टाचार, चेलीबेटी बेच्न बन्द गर्नुहोस ! « Channel Np
अब नेपाल बन्द हैन देशमा हुने गरेको ठगि, दलाली, घुसखोरी, भ्रस्टाचार, चेलीबेटी बेच्न बन्द गर्नुहोस !
प्रकाशित मिति : Tuesday, June 25th, 2019 at 10:31 PM
काठमाडौं : नेकपा ‘विप्लव’ समूहले आज नेपाल बन्दको घोषणा ग¥यो । यो सफल भयो या अस फल भयो भन्ने बारे चर्चा गर्दिनँ । तर, नेपाल बन्द गर्ने बोल्ड फेशन, थोत्रो आइ डियामा किन अल्झेका होलान् हाम्रा राजनीतिक दलहरु ? भनेर म चाँही छक्क मात्र होइन अक्क न बक्क प¥या छु ।राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न तर, म फुच्चे हुँदादेखिको नेपाल बन्दको आइडियामा हुर्केर बुढो हुन लागिसके ।
तर, अझै पनि बिरोध गर्ने शैली किन त्यति पूरानो, किन त्यति नन क्रियटिभ ? किन त्यति नन इफेक्टिभ? माग जायज– नाजायज त्यो तपाईहरु आँफै मूल्याङकन गर्नुहो् तर, कुनै पनि दलले राजनैतिक वा सामाजिक कारणले नेपाल बन्द गर्दा आम जनताको सम र्थन पाउँछन् ? ‘आइ डोन्ट थिङ सो ।’ आज यही नेपाल बन्दको सन्दर्भमा केही आइडिया सेयर गर्न चाहन्छु ।
यस्ता आइडियाहरु जसमा बन्द कर्ताका समर्थकले मात्र होेइन आम सर्व-साधारण र विरोधीले पनि खुसी व्यक्त गर्न सक्छन् । जुनसुकै दल होस्, जनताको समर्थन विना कहिल्यै पनि माथि जान सक्दैन ।अहिलेका नेपाल बन्दहरु मान्छे तर्सेर, आतंकित भएर सफल हुन्छन्, तर स्व–इच्छाले सफल हुदैनन् । नेपाल बन्द हुँदा विचारा केटाकेटीको स्कुल बन्द हुने हो । बन्दको दिन ट्याक्सी चलाउने, ज्याला मजदुरी गरेर पेट भर्नेको घरमा मिठो पाक्दैन ।
यति हुँदा कसैको बन्द सफल हुन्छ भने हो यो देशमा आजसम्म भएका सबै बन्दहरु सफल हुन् । हैन भने आउनुहोस्, बन्द गर्ने नयाँ आइडिया अपनाउनुहोस र आफ्नो दलप्रति व्यापक जनसमर्थन कमाउनुहोस् । त्यो पनि सित्तैमा । मैले भन्न खोजेकोे बन्द त दिन दिनै गरेपनि फरक पर्दैन ।जनताले जोड्दार तालीले साथ र समर्थन गर्छन् । भूमिका ज्यादै लामो बाँधेकी क्या हो । ल अब आइडिया सुन्नुस् है त ।
यातायात कार्यालयहरुमा सर्भर बन्द, नेट बन्द भन्दै सर्वसाधारणलाई दिनभर दुख दिइन्छ । त्यो लाइसेन्स दिने, रिन्यु गर्ने, सवारी दर्ता गर्ने, कर तिर्ने अड्डामा त्यस्तो कुनै काम छैन । जसलाई सम्पन्न गर्न २ घण्टा भन्दा बढी लागोस। एक दिन यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणले पाउने दुःख बन्द गरिदिनुस् त ! २ घण्टा भित्र नागरिकले सेवा पाएनन् भने तपाईको भाटे कारवाही होस् कि जनकार्वाही के हो ?
त्यसको डर त्यहाँ काम गर्नेलाई थाहा होस् । आम जनता त्यसै पीडित छन्, थप पीडा किन दिने ? विप्लवको डरले गर्दा अब त १ घण्टामा लाइसेन्सको काम तमाम हुन्छ भन्ने सन्देश गयो भने तपाइको पक्षमा जनसागर उर्लिन्छ विप्लव सर !के त्यस्तो डेट एक्स्पा यर नेपाल बन्द भनेर स्कुले बालक केटाकेटी तर्साउनु भाको ? वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालको हालत देख्नु भएको छ ?
त्यस्ता सरकारी अस्पतालको वेथिति बन्द भनेर घोषणा गरिदिनुस त एक दिन ! तपाईको वेथिति बन्दको दिन,सेवाग्राहीले लामो लाइन लाग्नु परे, अस्पतालमा सफा पानी नपाए, औषधिहरु नपाए,पिसाब फेर्न जाँदा वान्ता गर्नुपर्ने शौचालय हाकिमको एटेयाच्च ट्वाइलेट भन्दा नचम्के सिंगै प्रशासनलाइ्र्र कारवाही गर्ने घोषणा गर्नुस त ।देशका दुर दराजबाट आएका बिरामी र तिनका आफन्तले तपाईलाई आशिर्वाद दिनेछन् ।
तपाईको दलको लोकप्रियता यी २ बन्दले कहाँ पुग्छ, कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? बन्द गर्नु भनेको विकृति हो, विसंगति हो, भ्रष्टाचार हो, दलाली हो, कालोबजारी हो, सिण्डिकेट हो, कमिशनखोरी हो, नेपाल होइन । नेपाल त कहिले पनि बन्द गर्न हुन्न । नेपाल लाई त हमेशा खुल्ला राख्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु कुटिन्छन्, लुटिन्छन् ।एक दिन त्यो बन्दको आह्वान गरौं न।
निर्दोष नेपालीहरुले सीमानामा प्रताडित हुनु परेन भने कति खुसी होलान् । मधेशमा छिमेकीको हेपाहा प्रवृतिलाई एक दिन बन्द गरिदिनु होस । बाढीले बर्षौ हाम्रा नागरिक मर्छन्, घरहरु डुब्छन् । घर डुब्न र मान्छे बगेर मर्न नदिन बन्दको आह्वान गरौँ । तपाईलाई नचिने पनि खोजी खोजी फुलको माला बोकेर धन्यवाद दिनेको लाइन लाग्छ ।एक दिन चेलीबेटी बेच्नेहरुको सञ्जालबिरुद्ध बन्दको आह्वान गर्नुस् ।
झुक्याएर, फकाएर, लोभ देखाएर नेपालीचेलीहरुलाई, युद्धग्रस्त देशमा बेच्ने केन्या र अन्य अफ्रिकी देशमा यौ*न दासी बनाउन लैजाने, दिल्ली मुम्बई हुँदै तस्करी गर्ने जम्मैको धन्दा एक दिन बन्द घोषणा गरिदिनुस ।रहरले जाने केहीले बाहेक बाँकी चेलीहरुले तपा इको दलको सदस्यता नै लिन्छन् । यो बन्दमा कसको बिरोध हुन्छ, हामी पनि हेरौँला ती माइकलाललाई । एक दिन म्यानपवारबाट ठगिन बन्द भनेर आह्वान गर्नुहोला ।
हटलाइन नम्बरहरु राखेर ठगिएका नेपाली हरुलाई सम्पर्क राख्नुहोला भनेर आह्वान गर्नुस् तपाइको दलका कार्य कर्ताले फोन उठाएर भ्याउँदैन । त्यस पछि ती एजेन्ट र तिनको जनता ठग्ने म्यानपावरलाई बन्दको आह्वान गरिदिनुहोला । श्रम गर्न गएका लाखौ युवाले तपाईको दल लाई समर्थन मात्र होइन, सहयोग नै गर्छन् । समयमा ठेक्का नसक्ने कम्पनी, ढिला सुस्ती गरी र कमसल सामग्री प्रगोग गरी काम गर्ने कम्पनी र घुस खाएर त्यस्ता लाई टेन्डर दिने, पेश्की दिने, भुक्तानी दिने विभागको बर्षौको हर्कत एक दिन बन्द गर्ने घोषणा गर्नुस ।
त्यसको समर्थनमा लाखौ नेपाली उभिनेछन् । यी सबै वेथिति, विकृती विसंगति बन्द गर्न नै नेपाल बन्द गरेका हौ भन्ने तर्क दिन पनि अबदेखि बन्द गरिदिनु होला। कुनै पनि दल जनताका लागि हो भने जनतालाई दुख दिने सबै किसिमका वेथितिहरु बन्द गर्नुपर्छ ।यो आइडिया नेपाल बन्द बारे सोचेका सबै राजनीतिक दललाई फ्रीमा हो । अनि यति राम्रो क्रियटिभ, आइडिया दिँदा पनि यसले हाम्रो विरोध ग¥यो भनेर देख्ने, लेख्ने र बोल्नेको मुख चाँही तपाईहरुले नै बन्द गरिदिनुहोला ।